सरकारले भिटेन, दुर्गेश र पशुपतिको गीतमा किन चलायो कैँची ? - Purbeli News
सरकारले भिटेन, दुर्गेश र पशुपतिको गीतमा किन चलायो कैँची ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ०७, २०७६ समय: १३:०१:४४
ईटहरी । पछिल्लो समय चर्चित गायकहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन । बिहिबार चर्चित रयापर भिटेन जावलाखेलबाट पक्राउ परेका छन् । दुई दिनअघि मात्र गायक दुर्गेश थापा पक्राउ परेका थिए भने केही महिना अघि गायक पशुपति शर्मा माथि समेत गित बन्देजको अबस्था समेत सिर्जना भएको थियो ।
यसअघि तीजमा हामी पनि नाच्नुपर्छ बीच्च बीच्चमा गीत ल्याएर चर्चा कमाएका दुर्गेश ह्याप्पी तिहार, चिसो वियर.गीतका कारण विवादमा फस्दै पक्राउ नै परेका थिए । केही महिना अघि लोकगायक पशुपति शर्मा लुटन सके लुट भन्ने गित गाँउदा यस्तै बिवादको भुमरीमा फसेका थिए । भलै उनी पक्राउ परेनन् तरपनि पछि उनले गीत हटाए । पछिल्लो समय यस्ता गितले चर्चा पाएको बेला सरकारले यस्ता गितमा कैँची चलाउन थालेको छ ।
दुर्गेश पशुपति शर्मा भिटेन